Arsenal Oo Garaacday Kooxda Napoli Iskana Xaadirisay Semi-Finalka Europa Leageu, Valencia Ayay Balansadeen – Wararka Ciyaaraha Maanta
Arsenal Oo Garaacday Kooxda Napoli Iskana Xaadirisay Semi-Finalka Europa Leageu, Valencia Ayay Balansadeen
April 18, 2019 kooxda Europa League, Wararka Maanta 0
Kooxda Arsenal ayaa iska xaadirisay Semi-fina tartanka Europa League kadib markii ay guul kale ka gaadheen kooxda Napoli kulan ka tirsanaa lugtii 2-aad ee 8 dhamaadka Europa League.
Arsenal ayaa kulanka maamulaysay iyada oo ka fiicnayd kooxda Napoli kuwaas oo qaadayay weeraro Halis ah laakiin ku dhibaatooday in ay kubada shabaqa dhex dhigaan iyaga oo si la yaab leh isaga Khasaarinayay fursado cajiib ah oo ay ka heleen kulanka.
Kooxda Napoli ayaa bilowgii ciyaarta iska khasaarisay fursad ay ka dhalin kareen goolal ciyaartana dib ugu furi kareen waliba guul kaga gaadhi kareen kooxda Arsenal ee martida u ahayd.
Laakiin Gunners ayaa markeeda ka faa,idaysatay fursadeeda iyada oo daqiiqadii 36-aad dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu Alexandre Lacazette si cajiib ah laad xor ah ugu dhaliyay hogaankana ugu dhiibay kooxdiisa Arsenal.
Waxa sidaas ku damaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Gunners hogaanka u hayso ciyaarta laakiin Napoli ka dar-dar badantahay dhanka fursadaha.
Qaybtii dambe ee ciyaarta Ayaan wax weyn iska badalin inkasta oo ay labada kooxoodba sameeyeen fursado cajiib ah laakiin labada kooxood Ayaan wax gool ah dhalin.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo Arsenal sidaas ku gaadhay guul 1/0 ah iskana xaadiirsay Semi-finalka tartanka Europa League.
Dhanka kale Kooxda Valencia ayaa iska xaadirisay Semi-finalka taratanka Euro League kadib markii ay garaacday kooxda Villarreal iyada oo sidaas ku balansatay kooxda Arsenal oo ay kula ciyaari doonto Semi-finalka Europa Leageu.